» AKHRI: Hogaamiyahii Ugu Horeeyay Caana ah oo Dhambaal usoo diray M/weyne Farmaajo…Badweyntimes.com
AKHRI: Hogaamiyahii Ugu Horeeyay Caana ah oo Dhambaal usoo diray M/weyne Farmaajo…
Madaxweynaha dalka aynu walaalaha nahay ee Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa noqday hogaamiyihii ugu horeeyey caalamka ee hambalyo u soo dira madaxweynaha cusub ee Somalia Maxamed C/llaahi Farmaajo.
Ismaaciil Cumar Geelle ayaa sheegay inuu soo dhoweynayo isbedelka ka dhacay hogaanka dowlada Somalia, wuxuuna xusay in doorashadii ka dhacday magaalada Muqdisho ay astaan u tahay in Somalia ay cagta saartay wadada Dimoqraadiyada iyo horumarka.
“Waxaan Hambalyo iyo bogaadin u dirayaa madaxweynaha cusub ee Somalia Maxamed C/llaahi Farmaajo, waxaana ALLE subxaana watacaalaa uga baryayaa inuu waajibaadkiisa la garab galo, noqdana mid ummadda Soomaaliyeed” ayuu yiri Madaxweyne Geelle.
Waxaa uu ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed iney la shaqeeyaan madaxweynaha cusub, isagoo balan-qaaday in dowladiisa ay taageero iyo wada shaqeyn walaalnimo u muujin doonto madaxweyne Farmaajo.
Xalay ayey aheyd markii magaalada Muqdisho lagu soo gebagebeeyey doorashadii madaxweynaha Somalia oo ay ku tartamayeen 21 musharax, waxaana ku guuleystay Maxamed C/llaahi Farmaajo oo ugu codad badnaa ka dib markii uu tanaasulay madaxweynaha xilka ka degaya oo ay isku soo hareen wareegii 3aad.
« Warbixinta Ka HoreysayDaawo: Sheekha Reer Jabuuti Ugu Caansan oo u Bishaareeyay Somalida & Guusha Farmaajo…
Warbixinta Xigto »DEG DEG: Banaanbaxyo Waaweyn oo isqabsaday Magaalada Muqdisho & Risaas dhaceysa…